DEG-DEG: Arsenal Oo Dalab Cajiib Ah U Gudbisay Willian Si Ay Uga Dul Qaado Barcelona Iyo Isku Daygii Chelsea Oo Rajo La'aan Noqday. - Gool24.Net
DEG-DEG: Arsenal Oo Dalab Cajiib Ah U Gudbisay Willian Si Ay Uga Dul Qaado Barcelona Iyo Isku Daygii Chelsea Oo Rajo La’aan Noqday.
Kooxda Arsenal ayaa qaaday talaabo layaableh kadib markii ay dalab muhiim ah miiska u saartay xidiga sida xorta ah lagu heli karo ee Willian kaas oo diyaar u ah in uu si bilaash ah kaga baxo Stamford Bridge.
Kooxda Barcelona ayaa hore dalab rasmi ah u gudbisay xidiga reer Brazil ee Willian laakiin war hadda soo baxay ayaa sheegaya in Arsenal ay miiska Willian soo saartay dalabkii ugu fiicnaa oo ka sareeya kii ay Chelsea heshiiska cusub kaga doonaysay Willian iyo kan ay Barcelona u dirtay xidigan.
Willian ayuu heshiiskiisa Chelsea dhacayay June 30 laakiin sababtii karoonaha ee dib u dhicii xili ciyaareedka ayaa keentay in heshiiskiisa waqti kooban lagu daro waqti kooban si uu xili ciyaareedka ula dhamaysto kooxdiisa Blues.
Laakiin Willian ayaa in saddex jeer ka badan iska diiday heshiisyo cusub oo ay Chelsea u soo bandhigtay waxayna shuruudiisa ugu wayni ahayd in muddada qandaraaskiisa cusub laga dhigo ugu yaraan saddex sanadood taas oo ay maamulka Blues ku guul daraysteen in ay buuxiyaan.
Laakiin Barcelona oo sanado badan daba socotay saxiixa Willian ayaa dhawaan u muuqatay in ay xidiga reer Brazil helayso kadib markii ay buuxiyeen shuruuda Willian ee heshiiska saddexda sanadood isla markaana uu mushaar fiican ka qaadan lahaa Camp Nou.
Balse majalada caanka ah ee France Football ayaa hadda shaacisay in kooxda Arsenal ay noqotay kooxda Willian u soo saartay miiska dalab cajiib ah oo ay ku noqotay kooxda ugu cad cad ee xidigan bilaash kula wareegi karta.
Marka kowaad waxay maamulka Arsenal ogolaadeen in heshiiska uu Willian ugu soo biiri karaa uu noqdo muddada uu doonayo ee saddexda sanadood waxayna u gudbiyeen dalab heshiis oo uu ku qaadan doono mushaar ka badan intii uu ka heli lahaa Barcelona iyo Chelsea.
Intaas oo kaliya kuma koobna dalabka ay Arsenal ku doonayso in ay Chelsea iyo Barcelona kaga faro maroojiso saxiixa Willian balse waxaa loogu daray in uu haysan karo doorasho in uu heshiiska saddexda sanadood ah kadib kordhisan karo.
Waxayna hadda wararku cadeeyeen in kooxda Arsenal ay booska ugu fiican hadda u joogto in ay si xor ah ku heli karto Willian. Wixii ka soo kordha wararkeena soo socda ayaad insha allah kaga bogan doontaan isla marka ay xog dheeraad ahi ka soo baxdo.
Kornel Gaatamaaye says:
Arsenal Amaah iyo Xor Laacib aan ahayn suuqa Kama raadiso Miyaa.
Arsenal baa laciib Fiican lacagtaa kala soo baxday ma maqline in mudo ah.